नेपाल आज | बिनोद चौधरी र नबिल बैंकको कर्तुत: पैसा डिभिडेन्टको नाममा गैरकानुनी तरिकाले बिदेश लग्दै
बिनोद चौधरी र नबिल बैंकको कर्तुत: पैसा डिभिडेन्टको नाममा गैरकानुनी तरिकाले बिदेश लग्दै
काठमाडाैं । ब्यापारी बिनोद चौधरीले डिभिडेन्टका नाममा नबिल बैंकको पैसा अबैध तरिकाले बिदेश लगिरहेको खुलासा भएको छ । पूर्व संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय गोकुल बास्कोटाले नेपाल आजसँगको कुराकानीका क्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन् । नबिल बैंक र चौधरीले यस्तो अपराधिक काम गरिरहेको अवस्थामा पनि मिडियाहरु विज्ञापन लिएर चुप लागेकाे उनकाे आरोप छ ।
'त्यो नबिल बैंकको पैसा विदेश लैजाओस चौधरी ग्रुपले डिभिडेन्टका नाममा, त्यो सम्पूर्ण रुपले कानुनी रुपमा अपराधिक कार्य हो ।' उनले भने -'ल लेखुन नेपालका मिडियाले चुनौती छ मेरो । लेख्दैनन किनभने एउटा अखबारलाई बार्षिक ८० लाखदेखि १ करोड, २ करोडसम्म उसले दानापानी दिन्छ । उसित त्याे क्षमता छ।'
कानुन बिगारेर नेपालको पैसा विदेश लैजाने चौधरी ग्रुपले अबैध तरिकाले पार्टपुर्जा समेत भित्र्याउने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरी ग्रुपले कर छली गर्न जोडिएको पार्टपुर्जालाई खोलेर ल्याउने गरेको खुलासा गर्दै उनले भने- 'चौधरी ग्रूपले नेपालको पैसा बाहिर लैजाने ? पैसा यहाँ कति तिरेको छ ? पार्टपुर्जा के गरेर लिएर आएको छ ? जोडेर लिएर आए २५ प्रतिशत, भत्काएर लिएर आए १५ प्रतिशत !'
नेपालमा झुटको प्रचार र सम्मान गरिने गरेको भन्दै उनले बिनोद चौधरीजस्ता देश लुट्ने मान्छेहरुको भजनमण्डली हुने गरेको तर्क गरे । 'बिनोद चौधरीले यो देश कसरि लुटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाई लेख्नुसक्नु हुन्न तर गोकुल बास्कोटालाई यस्ले मुख छोड्छ भनेर लेख्नुहुन्छ । बिनोद चौधरीले १ अर्ब २५ करोड लुटेन ? बिनोध चौधरीले बैंक लुटेको छैन ? कानुन संसोधन गरेर ।'
बिनोध चौधरीलेदेश लुटेर नेपालमा मात्रै नभई अन्तराष्ट्रियरुपमा डलरको अरबपति भनेको भन्दै कर तिर्ने लिस्टमा भने उनको नाम कति नम्बरमा छ ? त्यो हेर्न मिडियाकर्मीलाई सुझाव दिए । पूर्वमन्त्री बास्कोटाले नेपालको हरेक मन्त्रलय र हरेक दलका सरकारका पालामा बिजनेश हुने गरेको भन्दै अरुका पालामा मात्रै उनीहरुले भ्रष्ट्राचार देख्ने गरेको दुखेको पोखे ।
आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपपछि ठगहरुले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको पनि उनको आरोप छ । 'धनी बनिरहुन नेपाल जनता, मेरो शुभकामना छ, म भ्रष्ट्रचारी बनिरहुला' उनले भने -'तर बर्षको १० अर्ब तिरुन, ३ बर्षको ३ अर्ब बाहिरिन्छ । ठिक छ, १८ अर्ब १९ अर्बको सिस्टममा नल्याउनु । ३० बर्षसम्म पैसा तिरीरहुन । ३ सय अर्ब विदेश पठाइरहुन र १८ अर्बको सिस्टममा लिएर नआउनु, मलाई भ्रष्ट्रचारी बनाइरहुन ।'
बिनासिस्टम चौधरी ग्रुपहरुले देश खोक्रो बनाइरहेको भन्दै उनले अगाडि थपे- 'देश खोक्रो बनाउने तरिका हो एउटा । किनभने सिस्टममा आउदा ड्राइभिङ लाइसेन्सको ठेक्का पर्नेको बिजनेश चैट हुन्छ । ईपासपोर्टको बिजनेश पनि चैट । सकियो सिस्टम आएपछि सबै खतम नि ! ध्वस्त ! एटिएम कार्ड, ईकार्ड वालाको पैसा पनि खत्तम, हुलाक टिकट खत्तम, बैंक खतम ! सब बिजनेश गर्नेहरुको बिजनेश चैट एकातिर हुने यहाँ २/३ हजार मान्छेले रोजगारी पनि पाउने ! अनि यस्तो काम पनि गर्ने हो त् देश धनी बनाउनलाई ?'
सबै कुरालाई व्यस्थित गरेर सिस्टममा लैजाउ भन्ने मान्छे नेपालमा अपराधी ठहरिने उनको गुनासो छ । नेपालले सेटेलाइटको लागि बार्षिक ५ अर्ब तिर्ने तर १८/१९ अर्ब खर्च गरेर आफ्नै सेटेलाइट खरिद गर्न नसक्ने, एउटा सेटेलाइटले १५ बर्ष काम गर्ने भएकोले १५ बर्षमा ७५ अर्ब पैसा विदेश गइरहेको उनले बताए । यदि नेपालने यस्ता सामग्री खरिद गर्दा देशका केहि सिमित व्यक्तिले भनेकै कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा बाहिर गएर खरिद गर्न खोजे काम गर्ने मान्छे भ्रष्ट्रचारी, देशद्रोही करार हुने गरेको उनले दुखेसो पोखे ।
दलालहरुले चलाएको देशमा सरकारले उनीहरुको कुरा सुन्न छोडेपछि सबै बहुलाह बनेको उनको ठोकुवा छ । देशमा कोरोना महामारी फैलिएको बेला पनि नबिन बिकले सस्तोमा समान ल्याउने भन्दै बखेडा झिकेको भन्दै बास्कोटाले मैहूँ भन्ने केहि मिडियाहरुले उसलाई उचालेको आरोप लगाए। 'कसले बोकेको थियो उसलाई ? अनि लिएर आइदियो समान ? ' उनले प्रश्न गरे - '२ दिनको रामछाँया र घामछाँया बनाउने दलाल अर्थतन्त्रका पक्षधरहरुको कुरा हो यो । सिस्टममा केहि पनि ल्याउन दिन हुदैन, सिस्टममा लिएर आएपछि देश आफै आत्मनिर्भर हुन्छ ।'
दास मनोवृति भएकाहरुको लागि आत्मनिर्भरता भनेको डरलाग्दो कुरा भएको उनको तर्क छ । 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले देशहरुलाई कति बलियो बनाउछ। स्विसलाई के गर्यो ? साना देशहरु पनि इकोनोमी रुपमा बलियो भएपछि कसैले केहि गर्याछ ? नेपाल सानो पनि होइन, ३ करोड जनसंख्या छ । भूगोलमा पनि सानो छैन, अझ हाम्रो अलिकति मिचिएको रैछ त्यो पनि आउँछ अब जोडिन्छ । यो भनेको हुनाले ढोंगको राजनीति गर्ने कुरा चाहिँ मलाई गतिलो लाग्दैन !' हेर्नुहोस भिडियो